Ukuphucula Ubuntu 18.04 ngqo kwi-Ubuntu 19.04 ukusuka kwisiphelo sendlela | Ubunlog
Ukuphucula Ubuntu 18.04 ngqo kwi-Ubuntu 19.04 ukusuka kwisiphelo sendlela
Kule migca ilandelayo siza kujonga Singahlaziya njani ukusuka ku-Ubuntu 18.04 siye ku-Ubuntu 19.04 ngqo kwi-terminal. Kwinqaku kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, umntu esisebenza naye wasichazela Ungayihlaziya njani Ubuntu 18.04 kunye no-Ubuntu 18.10 ukuya ku-Ubuntu 19.04. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba Ubuntu 18.10 isaxhaswa, abasebenzisi bohlobo lwe-18.04 kufuneka baqale bahlaziye uguqulelo lwe-18.10 kwaye balandele inkqubo efanayo yokuhlaziya kwi-19.04.
Into endicinga ukuba kufuneka uyikhumbule, yile Ubuntu 19.04 Disco Dingo sisindululo esiqhelekileyo. Oku kuthetha ukuba yenye yezo nguqulelo Inkxaso yeenyanga ezili-9. Ngokoluvo lwam, abasebenzisi abasebenzisa Ubuntu kwimisebenzi yemihla ngemihla kufuneka banamathele kuhlobo lweLTS, kodwa ngumbandela wokungcamla oko. Kulo mzekelo ndiza kusebenzisa umatshini ongu-Ubuntu 18.04, kuba bendihlala ndikhetha ukuhamba phakathi kweenguqulelo ze-LTS kumaqela endisebenza kuwo.
Njengoko ugxa wakhe ebonisile kwinqaku lakhe ukuba njani nyusela kwi-Ubuntu 19.04Ukuba abasebenzisi be-Ubuntu 18.04 balandela inkqubo yokuphucula esemgangathweni, baya kucelwa ukuba baphucule kuhlobo lwe-18.10 kuqala. Oku kungenxa yokuba Ubuntu 18.10 ayikafiki esiphelweni sobomi bayo obuluncedo. Emva kokuba Ubuntu 18.10 ifikelele esiphelweni sobomi bayo obuluncedo ngoJulayi 2019, abasebenzisi be-Ubuntu 18.04 baya kuba nakho ukuphucula ngokuthe ngqo kwi-19.04, ngokulandela inkqubo yokuphucula esemgangathweni..
Ngale nto ithethwayo, ngokulandelayo siza kubona ukuba sinokwenza njani Ukuphucula ukusuka kwi-Ubuntu 18.04 ngqo ukuya kwi-Ubuntu 19.04 ukusuka kwilayini yomyalelo, ngokudlula ku-Ubuntu 18.10. Ukuba awufuni kulinda iinyanga ezi-3 okanye awunaxesha lokuhlaziya kabini, unokulandela le miyalelo ingezantsi.
Inye into ebalulekileyo ekufuneka uyichazile ngaphambi kokuya kwisihloko, kwaye kunjalo ngaphambi kokuhlaziya, kunokuba yimfuneko ukusebenzisa inkqubo Ukubuya ukwenza umfanekiso we-ISO onamandla wenkqubo yakho yangoku. Ukuba uhlaziyo aluphumeleli ngaso nasiphi na isizathu, ungasoloko ubuyisela ngokulula inkqubo yakho yokusebenza nge-bootable ye-ISO. Yonke into kwinkqubo yakho yokusebenza, kubandakanya isoftware kunye neefayile, ziya kuba zilungile.
1 Ungahlaziya njani ukusuka ku-Ubuntu 18.04 ukuya ku-Ubuntu 19.04 ngqo ukusuka kwisiphelo sendlela
2 Khubaza imithombo yomntu wesithathu
Ungahlaziya njani ukusuka ku-Ubuntu 18.04 ukuya ku-Ubuntu 19.04 ngqo ukusuka kwisiphelo sendlela
Kule migca ilandelayo siya kuyo tshintsha indlela yohlaziyo esinikwa yiCanonical ngokwakhona. Inguqulelo Ubuntu endiyisebenzisela lo mzekelo yile:
Okokuqala, sebenzisa lo myalelo ulandelayo ukuya hlaziya isoftware esele ikho. Kubalulekile ukubeka ingqalelo ukuba i-kernel entsha ifakiwe ngelixa uqhuba lo myalelo, kuya kufuneka uqalise kwakhona ukuqhubeka ngenkqubo yokuhlaziya. Kwisiphelo (Ctrl + Alt + T) sibhala:
Siyaqhubeka nokuqinisekisa ukuba Sine-update-manager-core package efakiweyo Ukuchwetheza kwisiphelo esinye:
Into elandelayo esiza kuyenza yile hlela ifayile yoqwalaselo usebenzisa umhleli wombhalo owukhethileyo:
Emazantsi ale fayile, tshintsha ixabiso lesicelo lisuke "iilt"ukuya"eqhelekileyo".
Ekugqibeleni, gcina ifayile kwaye uphume kumhleli Isicatshulwa.
Khubaza imithombo yomntu wesithathu
Emva koko kuya kufuneka senze lo myalelo ulandelayo ukuya tshintsha onke amaxesha e-bionic kwidiski kwindawo yokugcina /etc/apt/sources.list. Bionic ligama le-Ubuntu 18.04, ngelixa fumana ligama le-Ubuntu 19.04.
Ukuba wongeze indawo yokugcina yomntu wesithathu kwifayile /etc/apt/sources.list nakwisikhokelo /etc/apt/source.list.d/, khubaza zonke izinto zokugcina umntu wesithathu. Uyakwazi ukwenza oku ngokunika ingxelo kumgca ngamnye kwifayile, ukongeza uphawu # ekuqaleni. Xa ugqibile, gcina ifayile.
Emva kokukhubaza indawo yokugcina umntu wesithathu, sebenzisa le miyalelo ilandelayo ukuya hlaziya imithombo yesoftware. Siza kuphinda sihlaziye isoftware kuhlobo lwamva nje olukhoyo kwindawo yokugcina Ubuntu 19.04. Eli nyathelo laziwa njengohlaziyo oluncinci:
Emva kohlaziyo oluncinci ugqibe, sebenzisa lo myalelo ulandelayo ukuya qala uhlaziyo olupheleleyo:
Ngoku unako susa iipakethe zesoftware ezingasasebenzi / ezingafunekiyo kwinkqubo yakho Ubuntu:
Ukugqiba uqalise kwakhona inkqubo:
Emva kokuqalisa kwakhona, ungavula ifestile yokugcina kunye jonga ingxelo yakho Ubuntu ngomyalelo:
Kuya kufuneka ubone into efana nale ilandelayo:
Ngale nto siza kuhlaziya Ubuntu 18.04 ngqo kwi-Ubuntu 19.04 akukho sidingo sokuhlaziya kabini okanye ulinde ukuba Ubuntu 18.10 iyekiswe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Ukuphucula Ubuntu 18.04 ngqo kwi-Ubuntu 19.04 ukusuka kwisiphelo sendlela
IWilder Ucieda Vega sitsho
Ndizamile ukuyenza bendinokothuswa kernel yam yokuqala, 🙂
Phendula kwiWilder Ucieda Vega
USantiago Castillo sitsho
Isetyenziselwa ukuyivuselela ukuba ifakwe i-W10 kwidiski efanayo kwaye iyayihlonipha?
Phendula uSantiago Castillo
Isebenza kakuhle !!
UJaime Morales sitsho
Umbuzo omnye, ndine-asus ryzen 5 enekhadi levidiyo yemizobo ye-radeon vega, kwaye ndivuselele ubuntu kuye ndilandela lo myalezo. Xa i-pc iqala, xa Ubuntu iqala, indibonisa isikrini esimfusa esihlala imizuzwana emi-3 ubukhulu becala; Xa bekhangela i-intanethi bathi kungenxa yabaqhubi bekhadi levidiyo, ngokokufuneka ndibalungiselele, inyani kukuba, andazi ukuba ndingayenza njani loo nto. Emva koko ndafumana enye impendulo isithi ukuba ndihlaziya ubuntu kuhlobo lwe-19.04 impazamo inokulungiswa, kodwa iyaqhubeka nokufumana.
Ngaba omnye wenu unazo naziphi na izimvo zokuyilungisa le nto?
Enkosi kwaye ndingavuya kakhulu ukuba uyandinceda.
Phendula kuJaime Morales
Molo, ndiyazi ukuba seyenzekile iinyanga ezininzi kodwa impendulo inokuba luncedo komnye umntu, yingxaki nge-ACPI, into ekufuneka uyenzile kukufaka ukhetho lokuqala kwaye ucofe ileta "e" ngoku sizakuhlela umgca Ithi i-linux kwaye Uya kubeka i-pci = np acpi. izakuqala
Igama loqhagamshelwano Lilyney sitsho
Ingxelo egqwesileyo, elula, esebenzayo kwaye kulula. Ndiyakuvuyela
Ekugqibeleni kufuneka ndiyibuyise ukusuka kwesiqhelo ukuya kwi-lts ??
JALGANI kwezinye iilwimi sitsho
Akukho mhlobo, kuba inguqulelo ye-19.04 ayisiyonguqulelo ye-LTS kodwa inguqulelo yesiqhelo, ndiyathemba ukuba ndikuncedile! 🙂
UAlberto gallegos sitsho
Isebenze ngokugqibeleleyo, uThixo akusikelele,
Phendula u-Alberto Gallegos
Molo, iifayile zam zisemngciphekweni ukuba ndiyahlaziya? Ngamanye amagama, kufuneka ndivume?
UErick tucto sitsho
Enkosi kakhulu ngeposi, ngoku ndineDisco Dingo kwikhompyuter yam.
Ngexesha lohlaziyo izitayile zeFumana zonakalisiwe. ukubona ezinye iinkcukacha ungabona eli khonkco lilandelayo lombuzo kwi-stackoverflow
Phendula u-Erick Tucto
I-Kdenlive 19.04 ikhutshwe namhlanje kolona hlaziyo luphambili
Ikhuphe ingxelo entsha yeSupertuxkart 1.0 yazi iindaba zayo